မြသွေးနီနှင့် မိသားစုငါးထမင်းစိမ့် | Skip to content
Posted on August 20, 2012 by mamyathway	Number of View: 4401
This entry was posted in အတွေ့လေးရယ်တဲ့မှ အို..အကြုံ. Bookmark the permalink.	← ကြိုးညှိသံများနဲ့ သံစဉ်၃၅
နေခြည်သစ်နွယ် says:	August 20, 2012 at 12:14 pm	မမရေ
Reply	လရိပ်အိမ် says:	August 20, 2012 at 12:23 pm	မမတို့မိသားစုဘဝပျော်ရွှင်စရာလေးပါ။ သားပြည့်လေးကလဲ လိမ္မာလိုက်တာ။
Reply	ကူးကူးလှိုင် says:	August 20, 2012 at 12:43 pm	အစ်မရေ အစ်မတို့မိသားစုအကြောင်းဆို အမြဲတမ်းကို ပိတီအပြည့်နဲ့ ဖတ်ရတာချည်းပဲ အရမ်းသဘောကျတယ် အဲလို မိသားစုလေးနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့စားရတာဆိုတော့ ငါးထမင်းစိမ့်က ပိုလို့အရသာကောင်းနေမှာပါနော်…
Reply	သဒ္ဓါလှိုင်း says:	August 20, 2012 at 1:25 pm	မမ..
Reply	မိုးညချမ်း says:	August 20, 2012 at 2:59 pm	မမရေ … အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသော စူပါဆန်းဒေးလေးဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့နော် … ပျော်စရာကြီး … မမရဲ့လက်ရာ ငါးထမင်းစိမ့်လေးလည်း စားချင်လိုက်ပါဘိ … Reply	မေဇင် says:	August 20, 2012 at 5:29 pm	စမ်းလုပ်ကြည့်ဦးမယ် မမရေ….. ပဲပုတ်၊ ဂျုးမြစ် တော့ ဒီမှာ အလွယ်မရဘူး။ ပဲပုတ် မပါရင်တော့ အရသာက လိုမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါမယ့် စမ်းကြည့်ဦးမယ်း)
Reply	ဆောင်းနှင်းရွက် says:	August 20, 2012 at 10:52 pm	အတော်ပဲ ..
Reply	ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) says:	August 20, 2012 at 10:56 pm	ငါးထမင်းရဲ့ နှစ်သက်ဖွယ်အရသာရော
Reply	နှင်းနဲ့မာယာ says:	August 21, 2012 at 1:54 am	မမ
Reply	အန်တီတင့် says:	August 21, 2012 at 9:14 am	မိသားစုတစ်စုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ နားလည်မှု အလိုက်သိမှုလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာမိသားစုလေးရဲ့ ထမင်းစားပွဲဝိုင်းလေးကို အလည်ရောက်ခဲ့တယ် မြသွေးရေ။ အေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးအဖြစ် ထာဝရရပ်တည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါစေ။
Reply	blackroze says:	August 21, 2012 at 9:19 am	မကြီးမြသွေး
Reply	ပန်းချီ says:	August 21, 2012 at 11:34 am	ဖတ်ရင်းနဲ့ ဂလု၊ ဂလုကိုဖြစ်လို့ မမမြသွေးရေ..
ချက်နည်းလည်းမှတ်သွားပါတယ် မရေ.. ပိတ်ရက်မှာလုပ်စားရစရာတစ်ခုတိုးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မ Reply	မနွယ် says:	August 21, 2012 at 4:38 pm	အစ်မရေ— ဖတ်နေရင်းကို စားချင်လာတယ်
Reply	မိုးငွေ့ says:	August 21, 2012 at 9:21 pm	စားချင်ထှာမမမြသွေနီရာ….ရှလွှတ်….
Reply	ဆန်းစနေ၀န်း says:	August 22, 2012 at 12:13 pm	အရမ်း သဘောကျပါတယ်…
Reply	LWINTHEIN says:	August 22, 2012 at 6:58 pm	thasnk you so much.your fish cooked rice.
Reply	ညီလင်းသစ် says:	August 23, 2012 at 5:22 am	တကယ့်ကို ချစ်စရာ မိသားစုလေးပါပဲဗျာ..၊ ငါးထမင်းဆိမ့် ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ ဆိုတာ အစကနေ ပြောသွားတော့ ဖတ်ရသူတွေပါ တပြုံးပြုံးနဲ့..၊ အမမြသွေးနီကို ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရမယ်လေ ဆိုပြီး အကိုက လှမ်းပြီးချည်လိုက်တာ သဘောကျတယ်၊ မိဘကို ကူညီတဲ့ သားပြည့်ကလည်း လိမ္မာလိုက်တာ..၊ မေတ္တာတွေ အပြန်အလှန်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်လက် ကူပြီးချက်တဲ့ ငါးထမင်းဆိမ့်က အရသာရှိမှာ အသေအချာပဲဗျို့..၊ သွားရည်တွေကျရင်း ဖတ်သွားပါကြောင်း…။း)
Reply	မလေး says:	August 23, 2012 at 12:40 pm	မမ.. ရေ အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် တခါမှ မလုပ်စားဖူးဘူး.. အခုတော့ ကိုယ်တိုင် လက်စွမ်းပြကြည့်လိုက်အုံးမယ် ..ကျေးဇူးပါ..မမ
Reply	မြဝတီဇော် says:	August 24, 2012 at 4:35 pm	မမရေ… ငါးထမင်းစိမ့်နဲ့ ဘူးသီးဟင်းခါးလေးရော၊ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် မိသားစုလေးအကြောင်း ကိုရော အားကျ နှစ်သက်စိတ်နဲ့ ဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း။
Reply	စန်းထွန်း says:	August 26, 2012 at 10:33 pm	မိသားစုတွေ အတူတူချက်ပြုတ်ကြတဲ့ ငါးထမင်းစိမ့်လေးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ထည့်လောင်းထားလို့အရသာရှိရှိ စားကောင်းနေမှာ သိပ်သေချာတယ်…
Reply	ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) says:	August 28, 2012 at 9:06 pm	ပျော်စရာ မိသားစုဘ၀လေးတွေကို မြင်ရတာ ကြည်နူးမိတယ်။
Reply	SUNANDAR says:	August 30, 2012 at 1:18 am	I’M SO INTEREST TO MAKE GOOD MEAL FOR MY FAMILY,THANKS ALOT PAR
Reply	Bo Bo Myint says:	August 30, 2012 at 5:07 pm	Next time you do it, pls share one for me.
Reply	မမိုး says:	September 1, 2012 at 3:20 am	ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီး ၀မ်းသာ ၀မ်းနဲ မျက်ရည်ဝဲသွားတယ် ညီမရေ..
Reply	စန္ဒကူးမေ says:	September 3, 2012 at 2:37 pm	ဖတ်ရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာလာတယ်…
Reply	mamon says:	December 7, 2012 at 12:52 pm	အရမ်းကို စားကောင်းမှာပဲနော် နောက်မှအိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်တော့မယ် ကျေးဇူးပါ
သူတို့အမြင် …မောင်ဘကြိုင် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားmin thein on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားmoewaitaw on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားဆွေလေးမွန် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားဦးအောင်မြင့် on ဤခရီး ဝေးလွန်းပါသလားအများဆုံးဖတ်တဲ့ပို့စ်အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 23974 hitsသမီးရဲ့မျက်လုံးလေး - 22315 hitsအိမ်မက်ကောက်ကြောင်း - 19112 hitsလပ်ကီးနဲ့ မီးညောင် (၂) - 17857 hitsခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 17566 hitsတစ်လချင်းစီ ရေးခဲ့တာတွေ…	Select Month December 2013 (1)